Gịnị bụ oriri eji eme ihe: njirimara, mkpa na ọha mmadụ | Mmeghari ohuru Green
A bịa n'ịchekwa gburugburu ebe obibi, oriri oriri ọ bụ ihe dị mkpa n'akụkụ ọha mmadụ. Anyị na -aghọta oriri dị mkpa dị ka akparamagwa nke ndị na -azụ ahịa na ndị ọrụ, nke pụtara oriri maara ihe na nke dị oke mkpa, nke nwere ike iji akụrụngwa dị mma mgbe ịzụrụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ mgbazinye yana n'ụlọ.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe oriri na -eri, gịnị bụ mkpa ya na njirimara ya.
1 Kedu ihe eji eri nri
3 Oriri dịịrị ọhaneze
4 Mkpebi na akọ na uche
Na mgbakwunye na ịghọta ikike ha, ndị na -azụ ahịa na ndị ọrụ nwere ụkpụrụ na -elekọta mmadụ na gburugburu ebe obibi na -eduzi ya iji mepụta ọnọdụ dị mma maka mmadụ niile ma hụ na oriri na -enwe mmetụta na gburugburu ebe obibi. Ebumnuche ya bụ imeziwanye ndụ na mbara ala a. Tinye aka n'ịdị mma nke ndụ ndị ụwa na nke ọgbọ na -abịa n'ihu.
Oriri dị mkpa dabere na ebumnuche abụọ, ya bụ, rie obere ihe anyị na -eri na -adigide ma na -akwado dịka o kwere mee. E guzobere omume a ka ọ bụrụ otu ụkpụrụ nduzi nke atumatu ọha na eze na "Iwu nnwere onwe nke Andalusia". Enwere ike ịhụ ntọala iwu maka oriri dị adị na mmepụta na -adigide n'isiokwu 191 na 193 nke Nkwekọrịta Ọrụ EU.
Ịzụta pụtara na -egbo mkpa ma ọ bụ chọrọ, mana ọ na -emekwa ka usoro akụ na ụba, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na gburugburu ya rụọ ọrụ. N'okwu a, ime nke a n'ụzọ ziri ezi pụtara ịzụta ihe na -eripịa na ihe na -adịghị; kedu ezi nnweta akụ na ụba anyị, wee họrọ ngwaahịa, ọ bụghị naanị maka ọnụ ahịa ma ọ bụ ịdị mma ha, kamakwa n'ihi na ha na -asọpụrụ gburugburu ebe obibi n'ihi na ụlọ ọrụ na -emepụta ha na -achịkwa ụkpụrụ nke ikike mmadụ na ikpe ziri ezi.
Na mgbakwunye, oriri eji eme ihe bụ akparamagwa nke nwekwara ike igosipụta n'ụlọ na omume ndụ. N'ilekọta na imezi gburugburu, ụmụ amaala ga -arụrịrị ọrụ ha n'otu n'otu. Mmegharị ahụ dị mfe dịka ịchekwa ọkụ eletrik, ọkụ, mmiri ma ọ bụ mmanụ ọkụ nwere ike imeziwanye ndụ ndụ n'ime obodo.
Ozugbo anyị matara ihe oriri bụ ọrụ, ka anyị hụ ihe njiri mara ya bụ:
Nke a bụ a mere ka amara n'ihi na eburu ụzọ mee ya, na -etinye nnwere onwe ime nhọrọ tupu mgbasa ozi yana ịmanye nrụgide nke ejiji.
Ọ dị mkpa n'ihi na ọ na -ajụ maka ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke eji emepụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ.
Ọ bụ ụkpụrụ, ma dabere na ụkpụrụ dị ka ibu ọrụ, austerity dị ka ihe ọzọ maka ịla n'iyi na iji ihe eme ihe ma ọ bụ ịkwanyere ikike ndị na -emepụta ihe na gburugburu ebe obibi ùgwù.
Ọ bụ gburugburu ebe obibi ma zere imebi akụ na ụba, n'ihi na imepụta oke ga -ebelata gburugburu.
Ọ dị mma n'ihi na ọ na -agba ume ibi ndụ dabere na nri dị mma na nke ziri ezi yana ịzụrụ ngwaahịa dị mma na gburugburu ebe obibi.
Na -adigide, n'ihi na mbenata oriri na -enweghị isi nwere ike imeziwanye ndụ ndụ na mbara ala na itule gburugburu ebe obibi, ọ ga -ewepụtakwa ntakịrị ihe mkpofu.
Ọ na -akwado ya, ebe ọ bụ na ya na ndị ọzọ na ọgbọ dị n'ihu ga -adị n'otu, n'ihi na a na -akwanyere ikike nke ndị mbụ ùgwù na ikike nke abụọ na -ekwe nkwa.
Es mmekọrịta ọha na eze n'ihi na ọ dabere n'ụkpụrụ enweghị ịkpa oke na enweghị nrigbu.
Ọ nwere ike nke mgbanwe mmadụ. Ndị na -eri ihe nwere ikike igbanwe akparamagwa dị ọcha ka ọ bụrụ agwa nwa amaala. N'ụzọ dị otu a, site na mmegharị ahụ kwa ụbọchị, ọ ga -ekwe omume itinye aka na mgbanwe dị mkpa na iwu na ụkpụrụ nke mmepụta na oriri ọha.
El ike ọha nwere ibu ọrụ imepụta ụkpụrụ iji mee ka akụ na ụba na -adigide, ịkwado na ịkwanyere ikike mmadụ ùgwù, mana nhọrọ ma ọ bụ ụdị oriri adịghị mma bụ onye na -azụ ahịa.
Oriri dịịrị ọhaneze
Ụzọ anyị si eri nri bụ ihe kpatara na ọtụtụ nsogbu gburugburu ebe obibi na -eche ụwa ihu taa: oke ohia, mwakpo plastik, mgbanwe ihu igwe na mfu nke ihe dị ndụ, yabụ anyị na -eme obere mkpebi gbasara ihe anyị ga -eri, ebe anyị ga -azụta ma ọ bụ ego ole kwa ụbọchị. Ọ dị mkpa karịa ka anyị chere.
Ụlọ ọrụ nwere ibu ọrụ dị mkpa na igbochi isi mmalite mmetọAgbanyeghị, ha na -agba nzọ na ịga n'ihu na -eme otu ihe ahụ n'ihi na nke ahụ bụ ihe ndị ahịa ha chọrọ.
Ụkpụrụ ndị bụ isi maka oriri dị mkpa bụ: azụmaahịa mpaghara, ikuku anwụrụ ọkụ carbon dioxide (CO2) dị anya, n'etiti ndị na -emepụta ihe na ndị na -eri ihe; usoro mmepụta nke na -akwanyere gburugburu ebe obibi ùgwù, ha na -eji ntinye kemịkal efu ma ọ bụ pere mpe, na -akwalite ụdị ndụ dị iche iche ma na -echebe ala Omume, mmiri na -adigide, njikwa na ndozi nke gburugburu ebe obibi, yana ibelata ngwugwu; ahia ziri ezi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-ahụ maka nkwanye ugwu maka ọdịbendị, ọnọdụ ọrụ dị mma yana usoro mkpebi mkpebi yana nke onye kwuo uche ya na mmekọrịta azụmahịa dabere na nghọta.
Mkpebi na akọ na uche
Ugboro ole ka anyị ga -atụle ihe a niile tupu ịzụrụ? Ugboro ole ka anyị na -enwe mmasị ịme ebe nchekwa nri n'ahịa mpaghara iji kwado akụ na ụba ezinụlọ ma ọ bụ netwọ ndị ọrụ ugbo? Anyị na -enyocha ma ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ enweghị plastik nwere ike ịtụfu, anyị na -ahọrọ nnukwu ụlọ ahịa? Ọ na -emetụta anyị ma ọ bụrụ na emepụtara ngwaahịa ndị anyị na -azụta na -emebiga ihe ókè nke akụ sitere n'okike na ọbụna ndị kacha daa ogbenye na mba ahụ?
Mkpebi ndị a na -eme ihe dị iche n'etiti usoro nrụpụta ọrụ dị mkpa dabere na ezigbo mkpa ndị mmadụ na usoro mmepụta na -efu mmepe nke akụ sitere n'okike, omenala na ọrụ ndị bi n'ime ime obodo ma ọ bụ ọnọdụ ibi ndụ dara ogbenye.
Anyị kwesịrị ịtụgharị uche n'ọnọdụ ndị a ọtụtụ oge, ghọta ha, nyochaa ihe ndị ọzọ na -adịghị mma na gburugburu ebe obibi dị wee malite ịgbanwe mkpebi anyị, n'ihi na akwụkwọ ozi a n'etiti mkpebi ụlọ ọrụ na mkpebi ịzụta na -ekpughe ike nke ndị na -azụ ahịa.
Dị ka ị na -ahụ, ọ dị n'aka anyị ka anyị nwee ike ịme oriri kwesịrị ekwesị iji mebie gburugburu kacha nta na ndụ anyị kwa ụbọchị. Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ihe oriri dị mkpa yana mkpa ọ dị maka nchekwa gburugburu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Kedu ihe eji eri nri